ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာလန်ခရုဇာများ | တိုယိုတာလန်ခရုဇာကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
အထူးသီးသန့်(3)
A/C: Front (13)
Cassette Radio (13)
Pearl white Toyota Land Cruiser 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steer...
Black Toyota Land Cruiser 2013 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Pu...
Pearl white Toyota Land Cruiser 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steer...
Black Toyota Land Cruiser 2012 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Pu...
Pearl white Toyota Land Cruiser VX 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Ste...
Silver Toyota Land Cruiser 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,P...
Black Toyota Land Cruiser 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 1,550 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Land Cruiser ZX 2011 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...
Lks 1,350 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Land Cruiser 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start....
Toyota Land Cruiser Prado B3 2017(+Tax)
Toyota Land Cruiser Prado 2017 selling price at USD 131,300 at exchange rate 1370 MMK + Tax.Price can be changed due to exchange rate.Engine : 1KD-Ftv/3.0-Liter L4 Diesel EnginePiston Displacemen...
Toyota Land Cruiser VX 2017 (+Tax)
TOYOTA LAND CRUISER 200 STATION WAGON 2017 selling price at USD 178,200 at exchange rate 1370 MMK + Tax.Price can be changed due to exchange rate.Engine : 1VD-FTV (4.5L,DIESEL)Transmission : 6/AT...
Toyota Land Cruiser Prado TX Limited 200...
Lks 470 ညှိနှိုင်း
Aung Lwin Oo Car Seller
Silver Toyota Land Cruiser Prado TX Limited 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် KZJ95-0158223) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Silver Toyota Land Cruiser Prado TX Limited 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် KDJ95-0005369) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Toyota Land Cruiser Prado TX Limited 199...
Lks 460 ညှိနှိုင်း
Silver Toyota Land Cruiser Prado TX Limited 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် KZJ95-0123677) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှ...
Toyota Land Cruiser Prado TX 2000
Silver Toyota Land Cruiser Prado TX 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် KZJ95-014868) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ...
Lks 445 ညှိနှိုင်း
Pear White မှ Pear White လည်းဖြစ်ရမယ်၊ ပစ္စည်းလည်း စုံရမယ်(Ori T.V/Sun Roof/TEMS/ခုံသုံးတန်း)၊ ကားလည်းကောင်းရမယ်၊ ဈေးလည်း သူများနဲ့ ယှဉ်ရင်တန်ရမယ်၊ Land Cuiser VX LIMTED ဖြစ်ပြီး၊ အိမ်စီးကား သန့်...
Lks 368 ညှိနှိုင်း
Green Toyota Land Cruiser Prado 1996 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင...
Toyota Land Cruiser ZX 2010
Pearl white Toyota Land Cruiser ZX 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Pus...
Pearl white Toyota Land Cruiser ZX 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Pus...
Lks 484 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Land Cruiser Prado 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင...
Lks 1,220 ညှိနှိုင်း
VX LTD Pearl leather seats Ori TV, Cool box, Sunroof မျဉ်းကွေးcamera Good condition
Lks 1,259 ညှိနှိုင်း
AXG selection Black leather Cool box 4BB 2013စုံ Good condition
Lks 580 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Land Cruiser 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးက...
Pearl White Toyota Land Cruiser Prado 2000 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering....
Black Toyota Land Cruiser ZX 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...
Black Toyota Land Cruiser ZX 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Star...
Lks 404 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Land Cruiser 1997 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးက...
Lks 555 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Land Cruiser 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးက...
မြန်မာပြည် အမြင့်ကားတွေထဲက လန်ခရုဇာ များ
မြန်မာမှာ လန်ခရုဇာကားများဟာ ဈေးကြီးတန်ဝင် ကား အမျိုးအစားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တော်ရုံလူတွေ ၀ယ်မစီးကြပါဘူး။ ဈေးနှုန်ူးက မော်ဒယ် အနိမ့်စားတောင် ကျပ် သိန်း (၃၀၀) နီးပါး ကပ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ တံဆိပ်ထဲက လန်ခရုဇာ ကားများဟာ SUV တန်ဝင် အမြင့်စား ဘီးအမြင့်ကားများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကား ကြီးသလို အင်ဂျင်လည်း ကြီးပါတယ်။ လန်ခရုဇာထဲမှာတော့ အော်တို ဂီယာတွေ အသုံးများ အလာများကြပါတယ်။ ဇိမ်ခံကား တစ်ဖြစ်လည်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ ကို ဂီယာမှာ အော်တိုသာ သုံးကြပါတယ်။
လန်ခရုဇာကို ဘီးအမြင့် ဇိမ်ခံကားတွေ ကြိုက်ပြီး ငွေ သုံးနိင်သူတွေအတွက် တိုယိုတာ လန်ခရုဇာဟာ ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ ယနေ့ထိတော့ လန်ခရုဇာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြစ် အနာအဆာတစ်စွန်းတစ်စမှာ သုံးစွဲသူတွေကြားမှာ ကြားရခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ မဆင်မခြင်မူတွေကြောင့် အရှိန်လွန်ပြီး မတော်တဆ ဖြစ်တာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ လန်ခရုဇာဟာ သုံးစွဲသူတွေရဲ့ ကြားမှာ ရေပန်းစားပြီး အရင် မော်ဒယ်တွေက အစ မရိုးရအောင် ရှိနေပါတယ်။ ရေပန်းစားမှု ကြားမှာ လန်ခရုဇာ အပြင် တိုယိုတာ လန်ခရုဇာ ပရာဒို ကိုပါ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇယ် ၊ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေ ရွေးနိင်ပြီး အင်ဂျင်ကြီးတဲ့ အတွက် ဆီစားကိုတော့ သိထားပြီး တွက်ချက်ကာ ၀ယ်ယူရဖို့ ရှိပါတယ်။
နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ တိုယိုတာ လန်ခရုဇာ တွေက မော်ဒယ် ၂၀၀၈ လောက်ကနေ ယနေ့ထုတ်အထိကို အနည်းဆုံး V6 ဆလင်ဒါ (၆) လုံးပါ ၄.၀ လီတာလောက်က စပြီး ၄.၅ လီတာ ထိရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး V8 တာဗို အင်ဂျင်မှာတော့ ဒီဇယ် အင်ဂျင်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ခရုဇာ ကားတွေ အားလုံးကတော့ လေးဘီးယက် စနစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၅၇၀၀ စီစီဖြစ်တဲ့ V8 အင်ဂျင်တွေမှာ မြင်းကောင်ရေအားဟာ ၃၈၁ သွားပြီး လိမ်အားပေါင် ၄၀၂ ရှိပါတယ်။ အော်တို ဂီယာ ၆ ချက်ကို ပုံမှန် မော်ဒယ် တစ်ခုအနေနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဆီစားမှာတစ်နာရီကို မြို့တွင်း ၁၃ ဂါလံကနေ မြို့ပြင် ၁၈ ဂါလံထိ ရရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကတော့ ဇိမ်ခံ လေးဘီ မောင်း V 8 အင်ဂျင်တွေအတွက် ပျဉ်းမျှ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံပြန်လည် မျှဝေသူများရဲ့ပြန်ပြောကြားချက်အရ လန်ခရုဇာတွေဟာ စီးရတာ သက်တောင့် သက်သာ ရှိပြီး ဘီးတွေရဲ့ အနောက်မှာ ကြီးမားမှုတွေကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင်းနှင်မှု ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း ကောင်းမွန် လွယ်ကူပြီး ပါကင်ထိုးရာတွင် လည်း အဆင်ပြေလှတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တိုယိုတာ လန်ခရုဇာရဲ့ ယမန်နေ့ရက်များ
ပထမဆုံးမျိုးဆက်ကို ၁၉၅၁ လောက်မှာ စတင်ထုတ်ပါတယ်။ ပုံစံကတော့ ဂျစ်ကား ပုံစံနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုးဖွင့်ပုံစံ၊ စတေရှင်း ၀က်ဂွန်၊ ထရပ်ပုံစံတွေလည်း ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တောင် ဆူဒန်မှာ အရောင်းရဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပြီး သြစတြီးရီးယားမှာတော့ လေးဘီးယက် လန်ခရုဇာတွေက ထို အချိန်တုန်းက နာမည်ကြီး အရောင်းရဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် တိုယိုတာဟာ သြစတြီးရီးယားမှာ ပြန်ပြီး ကျယ်ပြန့်စွာ စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကတော့ လန်လိုဗာ ဒစ်ကာဗာရီ၊ ရိမ်းရိုဗာ၊ မစ်ဆူဘီရှိ ပါကျဲရိုးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လန်ခရုဇာ ၂၀၀ မော်ဒယ်တွေမှာ အအေးခန်း သေတ္တာတွေပါ ပါဝင်လာပါတယ်။ စွမ်းအားကိုတော့ယာဉ်ရဲ့ အင်ဂျင်ကနေ ရရှိတာ ဖြစ်ပြီး အအေးတွေကို သယ်ဆောင်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ခရုဖာ ၂၀၀ ဗီ အိတ်ခ်ျမော်ဒယ်တွေနဲ့ ဒီဇယ် မော်ဒယ် တွေမှာ ထိုင်ခုံက ၇ ခုံပါ ရှိပါတယ်။ အနောက်ခုံတွေကို အလှန်၊ အချပြုနိုင်ပြီး အနောက်ခန်း အတွက် နေရာကို ပိုမို ရရှိစေပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ သုံး မော်ဒယ်တွေ တော်တော်များများ ( GX ) မော်ဒယ် အပါအ၀င် နဲ့ ဒီဇယ် တာဗို့ GXL မော်ဒယ်တွေမှာ ထိုင်ခုံကို ရှစ်ယောက်စီး အဖြစ် တိုးမြင့်ထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် ထိုင်ခုံ နေရာ ကျယ်ဝန်းမှုကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထည် ဘေးဘက် ကာကွယ်မှုတွေ အနေနဲ့ လန်ခရုဇာ မော်ဒယ် ၂၀၀ တွင် ကြာရှည် ခံနိုင်တဲ့ ကိုယ်ထည် ဘေးဘက် ကာကွယ်မှုနဲ့ လာပါတယ်။ ခြစ်ရာတွေနဲ့ အခြား အရာတွေကို ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးဖက်ရှိ ဖောင်းကြွပေါ်တွင် စိမ်းရောင် သတ္တု နဲ့အတူ ဒီဇိုင်းကို သိစေပါတယ်။ လေးဘီးမောင်းစနစ်တွေပေါ်မှာ ထပ်မံ ပေါင်းထည့်မှု အနေနဲ့ ထို ကိုယ်ထည် ကာကွယ်ခြင်း နည်းပညာဟာ လန်ခရုဇာ မော်ဒယ် ၂၀၀ တိုင်းမှာသာ ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ ကျတော်တို့ မြင်တွေ့နေရတာကတော့ J100 မော်ဒယ် စီးရီးနဲ့ J 200 စီးရီးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ J100 က ၁၉၉၈ ကနေ ၂၀၀၇ ထိ ထုတ်ပါတယ်။ ယခု ပြည်တွင်းမှာ အ၀ယ်လိုက်လျက်ရှိနေသေးတယ်။ ကားအမျိုးအစားထဲမှာ လည်း ယင်းမော်ဒယ်ပါပါ တယ်။ အများအားဖြင့်ကတော့ ၁၉၉၈၊ ၁၉၉၉၊ ၂၀၀၀ ၊ ၂၀၀၁ ထုတ်လောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.။ ကိုယ်ထည် ဆိုဒ်က တံခါး (၄)ပေါက် ၀က်ဂွန် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် ၄.၂ လီတာ၊ ၄.၅ လီတာ၊ ၄.၇ လီတာ အစားစား ရှိပါတယ်။ ဂီယာ (၅) ချက်မှာ မန်နျူးယယ်လာ ပါတယ် .
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ၂၀၀၇ ကနေ ယနေ့ထိ ထုတ်လေ့ရှိတဲ့ J200 ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို လတ်ဆတ် LX570 လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ တံခါး (၅) ပေါက် SUV ပါ။ ရှေ့အင်ဂျင်၊ လေးဘီး မောင်းဖြစ်ပြီး အင်ဂျင် ၄.၀လီတာ၊ ၄.၆ လီတာ၊ ၄.၇ လီတာ၊ ၅.၇ လီတာ တို့လာပါတယ်။ ၄.၅ လီတာမှာ တာဗို အင်ဂျင်ပါလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဂီယာ (၆) ချက် အော်တို ရှိပြီး ဂီယာ (၅) ချက်မှာ အော်တို မန်နျူးယယ် ရပါတယ်. အရင် မော်ဒယ်တွေထက် ကားအလေးချိန် အနည်းငယ် ပိုလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၂၀၀၆ မော်ဒယ် တိုယိုတာ လန်ခရုဇာ ဒီဇယ် အော်တိုကို သိန်း တစ်ထောင် လောက်ထိ ဈေးပေါက်ပါတယ်။ ပစ္စည်းစုံ၊ အစိတ်အပိုင်း စုံဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်ရူပါတဲ့ တိုယိုတာ လန်ခရုဇာ ဆိုက်ကနက်ဆိုရင် ဈေး ၄၅၀ သိန်းနဲ့ ၅၀၀ နားကပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မော်ဒယ်က ၂၀၀၀ လောက် ဖြစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးတွေက တကယ်ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ နှစ်အလိုက် ကွာခြားပါတယ်။ လတ်တလော တိုယိုတာ လန်ခရုဇာကို စလစ်နဲ့သာ သွင်းကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ မြန်မာနိင်ငံရဲ့ ပေါ်လစီအရ ၂၀၀၈ အထက်ကိုသာ ဖရီး ပါမစ်နဲ့ သွင်းခွင့်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်.ထို အတွက် ၂၀၀၈ မော်ဒယ်ကားတွေက ဈေးအလွန်မြင့်မားသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စလစ်နဲ့သာ စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ လက်ရှိ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင် တိုယိုတာ လန်ခရုဇာ တွေ ကို ဈေးကွက်မှာ ပိုတွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။